မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: "Burma's Martyr Day" 19th. July, 1947 - 19th. July, 2011 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
"Burma's Martyr Day" 19th. July, 1947 - 19th. July, 2011
Posted by အာဇာနည် at 12:32 PM